मोतीपुर घटना : त्यो कारवाही नगरेको भए अझै ठूलो क्षति हुने थियो : प्रजिअ तिवारी – Dcnepal
Tue, 19 Oct, 2021 | २०७८ कार्तिक २ गते
गृहमन्त्री खाणँद्वारा नर्भिक पुगेर वैद्यको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी
भारत र अमेरिका छाडेर किन जाँदैछन् देउवा बेलायत ?
महाकालीमा पानीको बहाब बढेपछि तटीय क्षेत्रका बस्ती डुबानमा
सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लामा बाढी : सेनाकाे हेलिकाेप्टरमार्फत उद्धार गरिँदै
नसियत पाएका जर्नेलको बढुवा, बनाइए मध्य कमाण्डको कमाण्डर, सेनामा राजनीति छिर्‍याे
उर्लियो महाकाली : तटीय क्षेत्रमा कटान
तालिवानलाई खुला पत्र लेख्दै मलला युसफजाईले भनिन्–किशोरीलाई पनि विद्यालय जान अनुमति देऊ
मोतीपुर घटना : त्यो कारवाही नगरेको भए अझै ठूलो क्षति हुने थियो : प्रजिअ तिवारी
प्रकाशित : २०७८ असोज २६ गते १०:२०
काठमाडौं। गत चैत्रमा तत्कालीन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्दा प्रतिकार गरेका स्थानीय र प्रहरीबीच झडपहुँदा रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा चार जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको छ।
स्थानीय र प्रहरीबीच भएको झडपमा प्रहरीका जवान पनि घाइते भएको रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) ऋषिराम तिवारीले जानकारी दिए।
डिसी नेपालसँग उनले सुनाएको कुरा उनकै शब्दमा :
विगतदेखि नै त्यो ठाउँमा समस्या थियो। स्थानीय प्रशासनले अवैध क्रियाकलाप नगर्न निर्देशन दिँदै आएको पनि थियो। त्यो हुँदा हुँदै पनि अतिक्रमण बढिरहेका कारण भदौ २८ स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न चार किल्ला तोकेर निषेधित क्षेत्र घोषणा पनि गरेका थियौं।
निषेधित क्षेत्र घोषणा भइरहेका बेला पनि विभिन्न जिल्लाहरुबाट, असम्बिन्धित क्षेत्रबाट पनि ठूलो संख्यामा मानिसहरु आएर अतिक्रमण गर्ने प्रयासहरु भइरह्यो। खासगरी सरकारी जग्गामा टहराहरु बन्न थालेपछि सुरक्षा निकायहरु परिचालन गरेर त्यसलाई हटाउने काम पनि विगतदेखि गरिआएका थियौं। सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न परिचालित भएका थियौंं।
असोज २४ गते अस्थायी रुपमा सशस्त्र प्रहरी क्याम्प स्थापना गर्ने र त्यहाँ भएका टहराहरु हटाउने तयारी भइरहेको अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा ठूलो संख्यामा जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरुको भीड जम्मा भएर सुरक्षाकर्मी लक्षित ढुङ्गामुडाहरु प्राहर हुन पुग्यो। सुरक्षाकर्मीले आत्मरक्षाको लागि सामान्य बल पनि प्रयोग गर्‍यो।
सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्नेबेलासम्म धेरै सुरक्षाकर्मी घाइते भइसकेका थिए। त्यसपछि अश्रुग्यास पनि सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गरे। अश्रुग्यासले तितरवितर भएका अतिक्रमणकारीहरु पुनः भेला भएर सुरक्षाकर्मी लक्षित आक्रमण गर्न थाले। त्यो आक्रमणका बेला सुरक्षाकर्मीमाथि पेट्रोलबमसमेत प्रहार भएको थियो।
पेट्रोलबम नै प्रहार भएपछि सुरक्षाकर्मीले आत्मरक्षाका लागि हवाई फाइरको प्रयोग गर्‍यो। हवाइ फाइर भएपछि पनि अतिक्रमणकारीबाट निरन्तर प्रहार भएपछि गोली पनि चलाउनु पर्ने अवस्था सृजना भएको हो।
घाइते र मृतकहरुको ठेगानालाई आधार मान्ने हो भने, संचार माध्याममा आएका सूचनालाई हेर्नेहो भने धेरै जसो व्यक्तिहरु रुपन्देही बाहिरबाट आएको पाइन्छ। वास्तविक सुकुम्बासी हुन वा होइनन् भन्ने कुरा पहिचान गरेर थाहा हुन्छ।
वास्तविक सुकुम्बासी हुन भने पनि होइनन् भने पनि प्रदेश सरकारले बनाएको छानबिन समितिले छानबिन गरेपछिमात्र भन्न मिल्छ अहिले मिल्दैन। त्यसका बाबजुद पनि स्थानीय भन्दा बाहिरी जिल्लाहरुबाट प्रवेश गरेको देखिएको छ।
बाहिरबाट मानिसहरु आएर त्यसरी प्रशासन, सुरक्षाकर्मी लगायतमाथि जाइलाग्नुको कारण योजनाबद्ध तरिकाले संगठित भएर नै जग्गा कब्जा गर्न लागेको भन्ने बुझिन्छ। यसरी योजनाबद्ध तरिकाले बाहिरबाट आएर आक्रमण गर्न थालेपछि सुरक्षाकर्मीसँग पनि बिकल्प रहेन।
हामीले सुरक्षाकर्मीलाई संयमित हुन भनिरहेका थियौँ। लामो समयसम्म त सुरक्षाकर्मीले आफू संयम भएर नै आक्रमणको प्रतिकार गर्नु भएको हो। तर, त्यो भन्दा ठूलो क्षति हुने अवस्था सिर्जना भएपछि सुरक्षाकर्मीको तर्फबाट गोली चलेको देखिन्छ।
यो सुरक्षाकर्मीको बाध्यात्मक अवस्था हो। यदि त्यो कारवाही नभएको भए सुरक्षाकर्मी तर्फपनि ठूलो असर पर्ने देखिन्छ। अरु जिल्लाहरुमा सुरक्षाकर्मी परिचालनको अवस्थालाई अध्ययन गर्ने हो भने पनि अन्तिम अवस्थामा मात्र त्यो कारवाहीमा सुरक्षाकर्मीहरु पुग्ने गरेका छन्।
मोतिपूर औधोगिक क्षेत्रमा कफ्र्यू जारी नै छ। हामीले जुन चार किल्ला तोकेर सूचना जारी गरेका छौं त्यो भित्र कफ्र्यू जारी राखेका छौं र अहिले स्थिति सामन्यकरण गर्ने तर्फ हाम्रो प्रयास पनि भइरहेको छ। हिजो र अस्ति दुई दिन सर्वदलीय बैठक बसेर समस्या समाधान गर्ने विषयमा छलफल पनि गरेको छ। त्यो बैठकहरुका कारण पनि अहिले अवस्था सामान्य हुँदै गएको छ।
विवाद आएको स्थानको केही तल्लो भागमा लामो समयदेखि बस्दै आएका र जग्गा धनी पूृर्जासमेत भएकाहरुलाई के गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारको समिति गठन भएर अध्यायन भइरहेको छ। हामीले पनि सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेका छौं। आवश्यक्ता अनुसार अझै पनि थप सजगता अपनाउने तयारीमा छौं।
प्रजिअ अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित
नेपालमा बाँडिने साहित्य पुरस्कारको खाम भित्र पैसा हुँदैन : हरि अधिकारी
नेपाललाई फेशन टुरिस्ट डेस्टिनेशनको रुपमा पनि प्रमोट गर्न सकिन्छः रमिला नेम्कुल, फेशन डिजाइनर
दशैंमा नेपाली पर्यटकलाइ स्वागत गर्न तयारी अवस्थामा छ पर्यटकिय नगरि सौराहा
मनाेज गजुरेलले गरे दाेस्राे बिहे । manoj gajurel । Manju Pokharel
द्वन्द्वको घाउ : जसले साहित्यकार बनायो /सरिता अर्याल /साहित्यकार
नेपाल धेरै नै सुन्दर देश हो, अब सगरमाथा चढ्न आउँछु : रुस्ताम नबिव | Rustam Nabiev |
नेपालको अध्यागमनमा यस्तो दुर्व्यवहार भोग्नु पर्दा
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको बक्तव्य सत्ताषड्यन्त्रको पूर्वसंकेत ?
त्यसबेलाको सलामीमा प्रधानसेनापतिलाई के भएको थियो? मञ्चमा थिए तर सलामीमा देखिएनन् (भिडियाे र तस्वीरसहित)
सगरमाथा देखेर दंग छन् अनुपम र परिणीती
बंगलादेशमा दुर्गा पूजामा हिन्दूमाथि हमलाः धार्मिक हिंसा भड्किन नदिन सुरक्षाकर्मी हाइ अलर्टमा
कलाकारकाे दसैं हेराैँ तस्वीरमा
अब्दुल्लाहले साफपछि नेपाली टोली नहेर्ने, राजीनामा दिने घोषणा
अमेरिकामा एउटी नेपाली चेलीको दुखद अन्त्य, पूर्वपतिले दिए दागबत्ती
को हुन् आर्यन खानसँगै ड्रग्स केसमा पक्राउ परेकी मुनमुन धमेचा ?
बिहे गरिसकेपछि थाहा भयो, श्रीमती त पोर्नस्टार रहिछन्
ड्रग्स पार्टीमा शाहरुखका छोरासँग अर्का ठूला अभिनेताकी छोरी थिइन्
दिल्लीमा अदालतमै दुई ग्याङको गोली हानाहान, मोस्ट वान्टेड डनको अदालतभित्रै हत्या
इन्दिराको सुटुक्क इन्गेजमेन्ट, क्याप्टेनको टिकटक भाइरल
शाहरुखका छोरा आर्यन हिरासतमा, केस दर्ता, रिया चक्रवर्तीका वकिलले केस लड्ने